Václav Havel Airport Prague: 121 nzvimbo dziri munyika 46 munguva ino yechando
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Václav Havel Airport Prague: 121 nzvimbo dziri munyika 46 munguva ino yechando
Airlines • nhandare yendege • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • Czechia Breaking News • nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Václav Havel Airport Prague yakazivisa kuti saSvondo, 27 Gumiguru 2019, iyo nguva yechando yekubhururuka inova inoshanda. Ichapa zvakanangana nendege kubva kuVáclav Havel Airport Prague kuenda kunzvimbo zana negumi neshanu munyika makumi mana nenhanhatu, kuenda kune dzimwe nhanhatu dzekuenda kupfuura panguva imwechete gore rapfuura.
Nzvimbo nyowani dzakawedzerwa munguva ino yechando dzinosanganisira Lviv, Kharkiv, Chisinau, Florence, Beirut, Nur-Sultan neKeflavik. Prague yenguva yechando ndege yekufambisa ichave inokwana gumi neshanu nzvimbo nyowani. Panyaya yenzvimbo dzekuenda, iyo hombe nhamba yekurwa ichatungamira London, kubva kunyika kuenda kuUK.
Munguva yemwaka wechando, ndege dzendege makumi matanhatu, idzo gumi nenhatu dziri dzakachipa-dzinotakura, dzinoshanda nendege dzakanangana kubva kuPrague Izvi zvinoreva kuti Prague Airport yaenderera mberi nekuchengetedza muyero wakanaka kwazvo pakati petsika nedzetsika dzendege.
Nzvimbo dzichave nyowani munguva iri kuuya yechando yekufamba nendege dzinosanganisira Lviv, Kharkiv, Chisinau, Casablanca, Perm, Florence, Nur-Sultan, Stockholm - Skavsta, Bournemouth, Billund, Beirut, Keflavik, Malta, Odessa neVenice - Treviso. Ndege ina dzichashanda basa rechando kubva kuPrague kekutanga: SCAT Airlines, SkyUp Airlines, Air Malta uye Arkia Airlines.
“Kuwanda kwenzvimbo dziri kuuya mumwaka wechando uri kuuya kunosimbisa kuti Prague inzvimbo inokwezva yendege neyevashanyi. Vatakuri veCzech vachabatsirwawo nekufarira uku, sezvo sarudzo nyowani dzekufamba kunze kwenyika dzichizaruka. Kunze kwenzvimbo nyowani kuEastern Europe, vafambi vanogona kutora mukana wekushandira kunzvimbo dzinowanzova nendege dzemwaka yezhizha kubva kuPrague, senge Iceland neMalta, "anodaro Vaclav Rehor, Sachigaro weBhodi revatungamiriri kuPrague Airport.